DAAWO: DF Soomaaliya oo heshay Hanjabaadii ugu adkeyd ee uga timi QM, kagana jawaabtay. – Puntlandtimes
DAAWO: DF Soomaaliya oo heshay Hanjabaadii ugu adkeyd ee uga timi QM, kagana jawaabtay.
June 4, 2019 W LAASCAANO
MUQDISHO(P-TIMES) – Dawladda Soomaaliya ayaa ka jawaabtay qoraalkii ay dhawaan soo saareen xubnaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midowbay, kaas oo aad looga hadlay arrimaha Soomaaliya, laguna soo qaaday in dawladda Faderaalku ay abuuri weyday xasilooni siyaasaded.
Wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Maxamed Cabdi Hayir (Maareeye) oo akhriyey warsaxaafadeed ayaa sheegay in ay dawladda Faderaalku soo dhaweynayso go`aamadii kasoo baxay fadhiga gaarka ah ee Qarmaada Midowbay.
Xukuumada Soomaalidu, waxay muujisay dabacsanaantii ugu hooseysay ee ay waligeed la timaado dawlad Soomaaliyeed, waxayna u muuqdeen kuwa welwel weyn ka qaba Hanjabaad Qaramada Midowbay ee kuwajahan hanaanka geedi socodka siyaasadda.
HALKAN KA DAAWO JAWAABTA DAWLADDA SOMALIA
Golaha Ammaanku wuxuu sheegay in ay u adeegsanayaan Soomaaliya xeerka Golaha Jamciyada Qaruumaha ka dhaxaysa qodobkiisa 7aad oo dhabaha u xaaraya in Soomaaliya loola macaamilo si dal aan daganeyn ayna xaaladdiisu u baahan tahay faragalin ciidan.
Jamiyciyda Qurumaha Midobay Golaheda Amanka,28 Sano waxay ku wadeen khalad jogto ah markastana waxay so sarayen kharar liita oo aan wax tar lahan,kan hada laso saray waxuu la xirira waxii aay so sari jireen wax ween kama badala ma muqdan,ummada somaliyed waxay umuqdan wadan lahagraday oo lagu firsaday tacadiyo taxane ah,QM uma hagar bixin in wadankan somaliya xaladisa ladajiyo,sanad kasta wa usanad baas.
Besha calam ka waxan ka cawinayna didii looheli lahaa xal waara kaso miro dhal noqda mustaq balka fog
axmed hawd says:
Intaa sugaysaan qaraarada UN, au, igad iwm maad Somaliland uu ugu horeeyo golaha guurtidu ka Dalbataan inlaydin baro Sida qilaafka loo xaliyo, Amma geesaha qilaafka igu Danby ugu hogaansamaan Canada guurtidu iyo culimada loon.a. tanaasulo
habraha isku waashay kala gura kaddib wax na bara